भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारलाई कोरोना सङ्क्रमण - दैनिक नेपाल न्युज
मुम्बई, २२ चैतः हिन्दी सिनेमाका ख्यातिप्राप्त अभिनेता अक्षय कुमारलाई कारोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उहाँले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिनुभएको छ । उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै नियमको पालना गरेर आफू अन्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट अलग बसेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
अभिनेता कूमारले आफू होम क्वारिन्टिनमा रहेको र आवश्यक औषधिहरु सेवन गरिरहेको बताउनुभएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको पनि बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो केही हप्तादेखि यूरोपेली मुलुकका साथै केही एशियाली मुलुकहरू पनि बढी प्रभावित बनेका छन् । (एएफपी)
रामजानकी मन्दिर जीणोद्वार गर्दा ऐतिहासिक इँटा फेला पर्यो
अष्ट्रेलिया छायांकन गरिएको डान्सिङ गीत ‘फूल फुल्यो केशरी’ सार्वजनिक (भिडियो)
सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर नेपाल चिनाए– रायमाझी
काठमाडौँ । मिस इको इन्टरनेशनल नेपाल अनुश्मा रायमाझीले नेपालको वातावरण र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा रहेको बताएकी छन् । नेपालमा इको टुरिजमको विकासका थुप्रै सम्भावना रहेको आफुले पाएको बताएकी [...]
काठमाडौँ । चर्चित साब्तिक समुह मङ्गोलियन हार्टका लोकप्रिय गायक राजु लामाले राजधानीबासी नचाउने भएका छन् । नेपाली नयाँ बर्षको २०७८को अवसर पारेर बैशाख १ गते बुधबार ठमेलको छाँयासेन्टरमा रहेको प्लेब्वाई [...]
१९ विधामा थपेर गीत संगीतमा ५१ वटा विश्व किर्तिमानी कायम गदै डा. उपाध्याय
काठमाडौं, ३१ चैत । गीत सँगीतबाट यस अघि विश्वका विभिन्न ३२ विधामा फरक फरक वल्र्ड रेकर्ड बनाएका विश्व किर्तिमानी गीतकार एवम् साहित्यकार डि. आर उपाध्यायले गीतसँगीतबाटै अरु १९ वटा विश्व [...]